सुनको मूल्यले तोड्यो नयाँ रेकर्ड ! यस्तो छ आजको बजार भाउ – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सुनको मूल्यले तोड्यो नयाँ रेकर्ड ! यस्तो छ आजको बजार भाउ
नेपाली बजारमा सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी माहासंघले शुक्रबारका लागि छापावल सुनको प्रतितोला मूल्य ७८ हजार १ सय र तेजावी सुनको मूल्य ७७ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
यस्तै चाँदीको प्रतितोला मूल्य ९ सय १५ रुपैयाँ पुगेको संघले जनाएको छ । बिहीबारको तुलनामा सुनको मूल्य तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थीर छ। फागुन ६ गते देखि दैनिक बढ्न थालेको सुनको मूल्यले हरेक दिन उच्च मूल्यको रेकर्ड राखेको महासंघले जनाएको छ ।
कोरोनाको ‘हट स्पट’ बन्दै काठमाडौ, सतर्क रहन विज्ञको सुझाब
गौशालाको जङ्गलमा एक अन्तरजातीय जोडी मृ*त भेटिए, प्रत्यक्षदर्शीले खुलाए यस्तो कुरा (भिडियो)
मंसिरसम्म पुराना मोटरसाइकलले कर तिरे सबै जरिवाना छुट